Wasiiradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya iyo Kenya oo ku kulmay Nairobi – Radio Daljir
Wasiiradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya iyo Kenya oo ku kulmay Nairobi
Abriil 4, 2019 4:35 b 0
Wasiiradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo Kenya Axmed Ciise Cawad iyo Monica Juma ayaa kulan labo geesood ah ku yeeshay magaalada Nairobi, iyagoo ka wada hadlay soo celinta xiriirkii labada dal ee xumaaday.
Monica Juma ayaa qoraal ay barteeda Twitterka soo dhigtay ku sheegtay in iyada iyo dhiggeeda Soomaaliya ka wada hadleen sidii xiriirka labada dal uu si caadi ah ugu soo laaban lahaa.
Waxaa ay sheegtay inay ka wada hadleen xaaladii ka dhashay xiriirka labada dal iyo walaacii Kenya ka qabtay shirkii Shidaalka London ka dhacay 7 February ee sanadkan.
Sidoo kale waxaa ay sheegtay inay ku heshiiyeen sidii dib loo soo celin lahaa Safiiradii labada dal, ugana laaban lahaayeen goobtooda shaqo.
Ma jirto wax war ah oo Wasaaradda Arrimaha dibadda Soomaaliya ka soo saartay kulankan labada Wasiir Arrimo Dibadeed ee Kenya iyo Soomaaliya.
Xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ayaa mugdi soo kala dhex galay, wixii ka dambeeyay markii Kenya ay sheegtay in Soomaaliya ay xaraashtay xirmooyin ku yaalla dhul xuduudka ay leedahay, waxaana dalkeeda ka eriday Safiirkii Soomaaliya, una yeeratay safiirkeedii Muqdisho.
Taliyaha Ciidanka Booliska Puntland oo ka hadlay dadka dambiyadda galay ee lasii daayo (Daawo)